खेलाडी र प्रशिक्षकको रुपमै सफल प्रकास « KhelkudNews.com
खेलाडी र प्रशिक्षकको रुपमै सफल प्रकास
Published On :9February, 2018 9:48 am
दिपक मर्हजनको साथमा प्रकास थापा
इतीहास देखि नेपाली खेलकुदको साख पावर गेममा नै निर्भर रह्यो । यसमा पनि बक्सीङको इतीहास त गौरवशाली रहेको छ । काठमाडौंमा भएको पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले चार स्वर्ण पदक जित्दा होस या सिउल एसियाडमा नेपालले ८ पदक जित्दा बक्सीङ खेलाडीको सपलता उल्लेख्य रह््यो । नेपाली बक्सीङले यसै महिना एउटा महत्वपूर्ण सफलता पाएको छ । भारतमा भएको प्रथम इन्डिया ओपन अन्तराष्ट्रिय बक्सीङ प्रतियोगितामा नेपालले दुइ काश्य पदक पाएको छ । नेपालले किङ्स कप र सात बर्ष अघिको एसियाडमा पाएको सफलता पछि पाएको यो नै महत्वपूर्ण सफलता हो । भारतमा भएको यो प्रतियोगितामा बक्सीङका शक्ति राष्ट्र क्युवा र उज्वेकिसतान लगायत २३ देशकोसहभागिता थियो । यसै सफलताले मुख्य प्रशिक्षक प्रकास थापाको प्रशिक्षक क्यारियर पनि अझ गर्वीलो बनेको छ । थापा सहितको डम्बर दत्त भट्ट, प्रविण तुलाधर र दिपक मर्हजन सम्मीलीत प्रशिक्षक टोलीले राष्ट्रिय टोलीलाई प्रशिक्षण गराइरहेको छ ।
पुनम र विमलाले पाएको पदकसंगै खेलाडी र प्रशिक्षकको रुपमा उत्तिकै सफलता पाउने सिमित नेपालीको कोटीमा प्रकास उभिन पुगेका छन् । खेलाडीको रुपमा प्रकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सफलता काठमाडौंमा भएको आठौ दक्षिण एसियाली खेलकुद र्ह्यो । सोही साग खेलमा उनी र उनका भाइ रामचन्द्र थापा मगरले स्वर्ण पदक जितेका थिए । पाचौ साग खेलकुद देखि सहभागिता जनाएका उनले पाचौ सागमा रजत पदक पाएका थिए । यसका अलावा भारतमै भएको एके मिश्र अल इन्डिया च्याम्पियनसीपको स्वर्ण पदक, चौथो अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रणमा रजत र वाइएमसी कपको काश्य पदक उनका खेल जिवनका महत्वपूर्ण सफलता हुन् ।
त्यसो त पाचौ देखि आठौ सागमा सहभागिता, ११ औ देखि १३ औ एसियाडमा सहभागिता र १२ औ देखि २१ औ राष्ट्रिय च्याम्पियनसीपमा जितेका प्रकासले लाइटवेट र वेल्टरवेटमा दशकभन्दा बढी समय प्रभाव जमाइरहे । निरन्तर आफ्नो काममा तल्लीन रहने सरल प्रकृतीका प्रकासका थप योजना पनि छन् । नेपाली बक्सीङलाई माथिल्लो उचाइमा पु¥याउने चाहना पनि त्यत्तिकै छ । भबीश्यमा उनको योजनाले कत्तिको सार्थकता पाउने हो ? त्यो त यकिन छैन । तर, एउटा सत्य के हो? भने खेलाडी र प्रशिक्षक दुवै भुमिकामा उत्तिकै सफलता पाउने सिमित नेपालीमा प्रकास एक हुन् ।
नेपाली बक्सिङ टिम भारत प्रस्थान
दोश्रो इन्डियन खुला महिला तथा पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा सहभागि जनाउन नेपाली टिम शुक्रवार गुवाहटीतर्फ